Ebe nchekwa Uta Bella na "Metek" (1978): Uta Bella bụ onye egwu nke bụrụla "ọkọlọtọ eburu" egwu Kamerun na mba ofesi, ọtụtụ mmadụ na-ajụ onwe ha "Gịnị bụ ọ ghọrọ taa? »O ka di ndu? ... (Na)
Site na: KongoLisolona: Septemba 19, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
Uta Bella bụ otu n’ime ndị bidoro egwu Kameroon. Ọ bụ onye setịpụrụ mmanya maka agba nke egwu Cameroon na mba ọzọ. Ọ nwere ọrụ ọ bara ma na-eme amara ma na-agbakwụnye. Ugbua n'ime afọ 60, ọ jisiri ike ịdekọ Njegharị 45 n'aha nke akara " Akue ".
À la fin des années 70, elle enregistre son album en style Afro-Funk akpọ Nasa-Nasa na nzuzo utu aha na kwuru album dị ka: « Nasa-Nasa »Et« Enyin Nke ga-aga nke ọma ma mee ka ọrụ ya bụrụ ihe efu.
Ebube diva nke egwu ndi Cameroon, Uta Bella nwere mmasị na ọ bụghị naanị n'Africa, kamakwa na kọntinent ahụ. O nyere anyị abụ olu ụtọ anaghị emebi emebi. Anyị ga-echeta nke ọma ọrụ ọma ya n'oge 20ème ememe ncheta nke nnabata Onye isi ala Ahmadou Ahidjo n'ike.
Ọ dị ka uru a est l’une de ses dernières apparitions publiques. Kemgbe ahụ echefuru ya. Ole na ole n’ime ha na-abịakwute ya. Ce qui fait dire à certains que le Cameroun a été ingrat à son égard alors beaucoup de ses titres très prisés comme « Enyi »Nọgide na-eme mkpatụ ma mee ka ọtụtụ ndị mmadụ dị nro, mMana ka emechara, Uta Bella ka bụ akara ngosi nke egwu ndị Cameroon.
Ọkt28 06: 04
iru mmiri 62%
iru mmiri: 85
iru mmiri: 83
iru mmiri: 88
Hi / le: 9/4 ℃
Robert Mugabe, ọ chụpụrụ ndị Ọcha? Mgbe mbido mbido mgbanwe agrarian na obodo ya Zimbabwe, Robert Mugabe gara na nkesa oke ala dị n'etiti ndị ọcha na ụmụ amaala Zimbabwe, mana amụma agrarian ahụ kpasuru iwe niile nke ndị ọcha yana ọkachasị nke Great Britain ( ike nke izizi) n'ihi na ọ chụpụrụ ndị ọrụ ugbo ọcha na Zimbabwe